Mere Downlight, Mere Down Ìhè, Dimmable Downlight - Ụtọ
Ụtọ anụ ụlọ downlight na-eche banyere ndụ ndị mmadụ na gburugburu na mba dị iche iche. Fire gosiri downlight eme ka bi odi mfe. Awụfu na agbanwe doo n'akuku mwube downlight enye na-elekwasị anya ọkụ na ziri ezi. IP65 downlight pụrụ igbochi mmiri na elu iru mmiri penetration. High RA na CRI ka gị ndụ ọzọ n'ezie. Low ntigbaa ìhè na-eme ka ìhè ahụ ike. Ezi uche na-eri na mfe wiring ka ụgwọ gị na-erughị.
CCT na bezel kennyeghari
Screwless & LOP IN / si njikọ
Agbanwe Doo n'akuku Setting n'otu oriọna
CCT mgbanwe + inyoghi inyoghi ka ọkụ mwube n'otu oriọna
Ele More ...
Ụtọ azụmahịa downlight dara abụọ àmà izute dị iche iche ahịa mkpa - na mmefu ego na Premiya. Ndị a oyiyi akwa na-designable nnọchi nke CFL na pl ìhè. N'ihi na ogologo ọkụ oge na pụrụ iche ebe eji, Ụtọ azụmahịa downlight enye 5 afọ akwụkwọ ikike na-enye ndị ọzọ agbanwe ọrụ nhọrọ otu oriọna. Ọzọkwa dị iche iche optic nhọrọ nwere ike na-enye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ nke ìhè idaha imewe.
CCT-agbanwe agbanwe na otu oriọna
Multi optic nhọrọ (relector + oghere + diffusers)
Triac, Dali & 1-10v dimming nhọrọ
Ụtọ smart downlight na-achịkwa via APP iji Bluetooth technology. Iji mfe ndị mmadụ akpata nchegbu na-achọghị akara ma ọ bụ ekwentị efu, anyị nwere mgbidi mgba ọkụ ka dakọtara. The ọhụrụ technology na-enyere anyị smart downlight ọzọ dakọtara na ndị ọzọ usoro. E wezụga akara, ndị dị ike ọrụ nke oriọna bụ a kere eke. Ọ nwere isi ìhè na okirikiri ọkụ n'isi ìhè na-acha ọcha na RGB nke kwesịrị ekwesị maka dị iche iche ngwa. Na Ụtọ smart downlight, ị pụrụ ime ka oriọna uwe gị na ọnọdụ n'oge ọ bụla na ihe ọ bụla ebe na aka nke a na ekwentị.
Independent isi ìhè na okirikiri ọkụ n'isi ìhè akara
Full na agba na ihie akara
Aka mwute facia
Ikuku Bluetooth egosi ìhè otu
Ò Kwekọrọ n'Ozizi na D1 & C1 ngwaahịa na mbuaha nrụnye
Anyị Ụtọ Lighting ọkachamara imewe na engineering ìgwè nwere ike ịmepụta ahaziri ngwaahịa ndị na-enyere ndị ahịa na-ọdịiche dị site asọmpi na nweta kacha uru ha na mpaghara ahịa. Anyị multi-lingual ahịa ọrụ oru ọrụ n'ụzọ ziri ezi ịghọta chọrọ nke niile ahịa na-enye ụlọ ọrụ na-eduga ọrụ ụkpụrụ n'ihu, n'oge na mgbe contracts zuru ezu.
Specialist ODM Supplier of ikanam Downlight Products
Ekwentị: + 86-0512-58428167